Home Wararka Aqriso:Shaqo Joojin Lagu Sameeyey Xogheyihii joogtada ahaa ee Wasaaradda Batroolka iyo Macdanka
Aqriso:Shaqo Joojin Lagu Sameeyey Xogheyihii joogtada ahaa ee Wasaaradda Batroolka iyo Macdanka
Xogheyihii joogtada ahaa ee wasaaradda Batroolka iyo Macdanka xukumada Soomaaliya, Jamaal Qaasim Mursal ayaa shaqo joojin lagu sameeyey, waxaana wareejiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada.
Wasiirka wasaaradda Batroolka iyo Macdanka Xukumada Soomaaliya oo ku saxiixa warqaddan ayaa cuskaday qodobo ay kamid yahiin.
Bixinta siraha muhiimka ah ee wasaaradda ee loo gudbiyo dad kale oo ka baxsan wasaaradda.
Wada shaqeyn la’aanta joogtada ah ee ka timid dhanka xogheyaha iyo curyaaminta habsami u socodka howlaha wasaaradda
Cabashada shaqaalaha iyo howl-wadeennada wasaaradda
Ku xad-gudubka hannaanka kala sareynta shaqada iyo hab maamulka guud ee wasaaradda
Dhinaca kale, ma jirto war ka soo baxay Jamaal Qaasim Mursal ee la xiriira shaqo joojinta lagu sameeyey iyo sida uu u arko eedeynta wasiirka.
Previous articleWasiirka Ganacsiga oo Magacaabay Xoghaye guud
Next articleWarar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay degmada Qoryooleey
XOG:yaasoo agaasimay Weerarkii Hoteel SYL lagu qaaday